केसीको पक्षमा हेटौँडाका स्वास्थ्यकर्मी
८ साउन, हेटौँडा । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि दुई सातादेखि अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार हेटौँडामा प्रर्दशन भएको छ । मेडिकल ल्याव एशोसियसन (मेलान) मकवानपुर र हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले हेटौँडामा प्रर्दशन गरेका हुन् । मेलान मकवानपुरका अध्यक्ष उत्सव चौलागाई र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा....
काठमाण्डौंमा केसीको समर्थनमा प्रर्दशन
८ साउन, काठमाण्डौं । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि दुई सातादेखि अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार काठमाण्डौंमा प्रर्दशन भएको छ । समर्थनमा सामाजिक संजालमा सक्रिय युवा तथा स्वस्र्फुत रुपमा उपस्थित व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । विभिन्न क्षेत्रबाट प्लेकार्डसहित ¥यालीमा सहभागीहरु माइतिघर मण्डलामा पुगेर जम्मा...
७ साउन, हेटौँडा । मकवानपुर प्रहरीले लागुऔषधसहित तीन युवकलाई पक्राउ गरेको छ । इप्रका पशुपतिनगरले बीरगंजबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस हेटौँडा–१७ मा चेकजाँच गर्ने क्रममा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका हेटौँडा–११ का समिर लामा र भक्तपुर दुवाकोटका मनोज दोङको साथबाट डाईजेपाम ७, नोर्फिन ६, फेनार्गन ३ र एभिल २ एम्पुल...
केन्द्रको सेवा स्थानीय सरकारबाटै
७ साउन, हेटौँडा । केन्द्र, क्षेत्र, डिभिजन, अञ्चल, जिल्लाबाट पाउने सेवाहरु अब स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट पाउँने भएका छन् । त्यस्तै, अहिलेको गाबिसबाट पाउने सेवाहरु वडा वा संयुक्त वडा कार्यालयहरुबाटै पाउँने भएका छन् । संघीय संरचना अनुसार क्षेत्रीय, डिभिजन, अञ्चल, जिल्ला कार्यालयहरु नरहने भएकाले गाउँपालिका र...
एनआरएनले नेपाली सेनालाई सघाउने
६ साउन, काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापनमा गैरआवासिय नेपाली संघ एनआरएनले नेपाली सेनालाई सघाउने भएको छ । सेनाको व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी हिमालय थापा र संघका तर्फबाट अध्यक्ष शेष घलेले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहयोगको मापदण्ड र अवस्था निर्धारणका लागि सेना र संघको संयुक्त कार्यदल बनाउने समेत सहमती भएको छ । नेपाली...
डा केसीसित वार्ता गर्न टोली गठन
६ साउन, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनशनरत डा गोविन्द केसीको मागका सम्बन्धमा वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । बुधबार साँझ सम्पन्न मन्त्रिपरिषदबैठकले तीन जना सचिव रहेको वार्ता टोली गठन गरेको हो । बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहेको टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको...
४ साउन, हेटौँडा । मकवानपुर प्रहरीले लागुऔषध लुकाई ल्याईरहेको अवस्थामा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । बीरगंजबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरको ना ३२ प ९३२१ नम्बरको मोटरसाइकल चेकजाँच गर्ने क्रममा लागुऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा चालक काभ्रे जैसिथोक–६ का २६ बर्षिय रमेश तामाङ र मोटरसाइकलमा सवार बीरगंज–६ घर भई काठमाण्डौं...
अनलाइनबाटै सरुवाको निवेदन !
४ साउन, काठमाडौं । निजामति कर्मचारीले अनलाइनबाटै सरुवाको निवेदन दिन सक्ने भएका छन् । सरुवाकै लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको भीड बढ्ने र पहुँचका आधारमा सुरुवा हुने क्रम बढेपछि अनलाईनबाटै सरुवाको व्यवस्था गरेको हो । अब मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर निवेदन दिन सकिने भएको छ । अनलाईनबाट निवेदन नदिन नचाहने कर्मचारीले पुरानै...
एक लाखको अवैध सामान बरामद
४ साउन, हेटौंडा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले एक लाख रुपैँया बराबरको अवै सामना बरामद गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत चुरियामाई चेकपोष्टमा चेकजाँचका क्रममा मोवाईल, टिभी गरी एक लाख ६ हजार रुपैँया बराबरको सामना बरामद भएको हो । काँकडभिट्टाबाट काठमाण्डौं जान हेटौँडा आउँदै गरेको ना५ख ४३७५ नम्बरको बसको डिकिबाट ४९ थान विभिन्न...